”Waan aqbalayaa wixii iiga yimaada taageerayaasha Chelsea xitaa haddii ay igu orriyaan”. – Mourinho – Gool FM
”Waan aqbalayaa wixii iiga yimaada taageerayaasha Chelsea xitaa haddii ay igu orriyaan”. – Mourinho
(London) 04 Nof 2017 – Macallinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ku adkaysanaya inuusan jirin wax dhib ah oo kala dhexeeya taageerayaasha kooxdiisii hore ee Chelsea kahor kulanka uu berritoole isla kooxdaasi ku wajahayo.
“Wax dhibaato ihi marna ma jiraan, jidka marka aan marayo waxaan la kulmaa taageerayaal badan oo Chelsea ah, waxaana arkaa taageerayaal badan mana la kulmin mid aan ii fiicnayn,” ayuu yiri Mou.
“Garoonka kubadda cagtu waa wax kale, sidaa darteed marka aan tago Stamford Bridge, waxaan ahay macallinka koox lid ah sidaa darteed waan aqbalayaa dareen kasta oo iiga yimaadda xitaa orris anigoo weliba xushmaynaya.” ayuu daba dhigay.
Edin Dzeko oo la ogaaday inuu iska diiday dalab uga yimid horyaalka shiinaha
Aniguba waan ku cabaadi karaa dhaawacyada kooxdayda'' - José Mourinho oo ku dhega hadlay Conte